Yale waxay bixisaa koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah oo loogu talagalay ardayda iyo xirfadleyda maqaalkani wuxuu siinayaa faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan koorsooyinkan iyo xirfadaha aad ka heli doonto markaad dhammayso koorsada.
Koorsooyinka onlaynka ah ayaa lagu beddelay boosaska iskuulada caadiga ah cudurkan faafa awgood. Dhamaan waad ku mahadsantahay internetka iyo aaladaha dijitaalka ah ee aad ku baran karto khadka tooska ah isla markaana aad ku qalabaysan karto xirfado isku mid ah iyo aqoon ay hay'adda caadiga ahi ku siin doonto.
Koorasyadan khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah waxaa wax ka qabta aqoonyahanno ku xeel dheer daraasadda. Koorsooyinku waa bilaash in la codsado oo wax la barto, sidaas darteed uma baahna nooc kasta oo lacag bixin ah waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa waqtigaaga, cibaado, xiriir internet, iyo qalab raaxo ugu leh waxbarashadaada; laga yaabee laptop, kombiyuutar, ama taleefan casri ah.
Barashada khadka tooska ah waxay leedahay faa'iidooyinkeeda gaar ahaan waqtiyadan ugu dambeeyay ee cudur faafa oo caalami ah oo socda, waxaa muhiim ah inaad sii wado barashada waxyaabaha cusub, aad sii waddo inaad xoojiso xirfadahaaga, aad barato kuwa cusub, aad ku kasbato aqoon cusub ama siyaado dheeraad ah oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee waxbarashada, iyo tan iyo maya Aqoonta la kasbaday waa la khasaaray waxaa hubaal ah in maalin un ay soo gali doonto.
Yale waa jaamacad caan ah, oo caan ku ah adduunka, waxay soo saartay qaar ka mid ah dadka ugu waaweyn, waxayna wax weyn ku soo kordhisay adduunka iyada oo loo marayo waxbarashadeeda tayada leh ee ay hay'addu bixinaysay tan iyo 1701.
Ku saabsan Jaamacadda Yale
Koorsooyinka Yale ee Bilaashka ah
1. Soohdimaha Injineeriyada Biomedical
2. Suuqyada Maaliyadeed
3. Aragtida dhaqaalaha
4. Siyaasadda iyo Sharciga Deegaanka
5. Ilbaxnimada Reer Yurub
6. Hordhac Taariikhdii Griiggii hore
7. Aasaaska Anshaxa ee Siyaasadda
8. Aasaaska Fiisigiska
9. Hordhaca Muusikada Qadiimiga ah
10. Aasaaska aragtida bulshada ee casriga ah
11. Aragtida Ciyaarta
12. Hordhaca cilmu-nafsiga
13. Ciqaabta dilka: Jinsiyada, Saboolnimada iyo Faa'iido darrada
14. Hordhaca Aragtida Suugaanta
15. Chemistry-ga Organic ee Freshman 1
Gunaanad ku saabsan Koorsooyinka Online-ka ee Yale Free
Jaamacada Yale waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay ee Ivy League oo ku taal New Haven, Connecticut, USA waana machadka saddexaad ee ugu da'da weyn tacliinta sare ee Mareykanka iyo, dabcan, kaalinta sida mid ka mid ah Mareykanka iyo jaamacadaha adduunka ugu sareeya.
Jaamacadda Yale waxay la shaqaysaa shakhsiyaadka iyo hay'adaha adduunka oo dhan iyada oo raadineysa kor u qaadida fahamka dhaqanka, hagaajinta xaaladaha aadanaha, si qoto dheer ugu dhexjirta siraha adduunka iyo tababarida jiilka soo socda ee hoggaamiyeyaasha adduunka.
Tan iyo aasaaskeedii ilaa maanta, Yale wuxuu u heellan yahay ballaarinta iyo wadaagista aqoonta, dhiirrigelinta hal-abuurnimada, iyo ilaalinta macluumaadka dhaqanka iyo sayniska ee jiilalka soo socda.
Si kastaba ha noqotee, raadinta fidinta iyo wadaagista aqoonta wali ma yarayn oo iftiinka hal-abuurnimaduna wali wuu ifayaa illaa maanta, sidaas darteed koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee u furan qof walba adduunka oo dhan inay codsadaan oo ay ku helaan aqoon iyo xirfado ay doortaan.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah waxaa ka mid ah muxaadarooyin iyo waxyaabo kale oo laga soo qaatay koorsooyinka Yale College ee la soo xulay oo dadweynaha loogu siinayo bilaash internetka. Koorsooyinku waxay ku kala duwan yihiin noocyada kala duwan ee farshaxanimada farshaxanka, cilmiga aadanaha, sayniska jireed, cilmiga bayoolojiga, iyo cilmiga bulshada oo si wanaagsan loogu talagalay inay ku habboon yihiin nooc kasta oo bartayaal ah.
Waxaan horey ugu qornay qaar ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee Kanada iyo tiro ka mid ah koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin daabacan u furan ardayda adduunka oo idil.
Ka dib xaqiiqda ah in ardaydu doorbidaan koorsooyinka internetka ee wax ku oolka ah, waxaan sidoo kale ku qornay qaar koorsooyinka kombiyuutarka ee internetka oo wata shahaadooyin kuwaas oo baraya xirfado farsamo oo dijitaal ah oo ardayda iyo xirfadlayaashu ka qayb qaadan karaan.
Anigoon ku sii dheerayn, waxaan soo qori doonaa koorsooyinkan.
Xuduudaha Injineeriyada Cilmiga biomedical
Siyaasadda Deegaanka iyo Sharciga
Ilbaxnimada Reer Yurub
Hordhac Taariikhda Gariigii Hore
Aasaaska Anshaxa ee Siyaasadda
Hordhaca Muusikada Qadiimiga ah
Aasaaska aragtida bulshada casriga ah
Ciqaabta Dilka: Jinsiyada, Saboolnimada, iyo Faa'iido darrada
Hordhaca Aragtida Suugaanta
Kimistariga Freshman Organic
Baadhitaan qoto dheer ka dib, waxaan la imid 15 koorso oo bilaash ah oo Yale ah kuwaas oo hubaal ah inay kuu danaynayaan xiisahaaga adiguna aad ka dooran karto.
Koorsadan khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Xuduudaha Injineeriyada Biyomediga, waxay daboolaysaa fikradaha aasaasiga ah ee injineernimada biomedical iyo xiriirka ay la leeyihiin noocyada dhaqdhaqaaqa aadanaha. Koorsada waxaa loogu talagalay sayniska iyo sayniska sayniska oo ay ku jiraan daraasadaha kiisaska daroogada iyo alaabada caafimaadka, ilaalinta patentka, iyo ansixinta FDA.
Dhameystirka koorsadan waxay kuu fureysaa fursado aad ku leedahay qaybta caafimaadka mid dowladeed ama mid gaar loo leeyahay.
Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Suuqyada Maaliyadeed, waxay ardayda siisaa fahamka aragtida maaliyadda iyo sida ay ula xiriirto taariikhda, xoogga iyo cilladaha hay'ad sida bangiyada, dammaanadaha, mustaqbalka, caymiska, iyo suuqyada kale ee deriska ah, iyo mustaqbalka kuwaan hay'adaha qarniga soo socda.
Waxaad ka kororsan doontaa aqoonta sida ay u shaqeeyaan suuqa maaliyadda iyo hay'adaha la xiriira iyo taariikhda suuqa maaliyaddu.
Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Aragtida Maaliyadeed, waxay isku dayeysaa inay sharraxdo doorka iyo muhiimadda nidaamka maaliyadeed ee dhaqaalaha adduunka waxayna sidoo kale si cad u muujineysaa nooca fikirka iyo falanqaynta ay sameeyeen lacagaha deyrka.
Koorsadan Yale ee bilaashka ah, Siyaasadda Deegaanka iyo Sharciga, ardayda waxay dib u eegi doonaan qaab dhismeedka sharciga waxayna qiimeyn doonaan mudnaanta iyo xumaanta. Sharciga waxaa lagu baari doonaa iyada oo loo marayo taariikhaha kiisaska sida saameynta deegaanka ee amniga qaranka, wax soo saarka macaamiisha, sunta cayayaanka, koritaanka magaalooyinka iyo fiditaanka, isticmaalka dhulka, maareynta aagga, gaadiidka dadweynaha / gaarka loo leeyahay, badbaadada cuntada iyo kuwa kale.
Koorsada Yale ee bilaashka ah, Ilbaxnimada Yurub, waxay bixisaa sahan ballaaran oo taariikhda Yurub ee casriga ah, laga soo bilaabo dhammaadkii Dagaalkii Soddon-sano ilaa wixii ka dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Dhacdooyinka kale ee taariikhiga ah iyo tirooyinka kale ayaa si isku mid ah loo tixgelin doonaa inta lagu jiro barashada.
Koorsadu waxay ku siin doontaa aragti ku saabsan taariikhda Mareykanka iyo Yurub, sida ay wax u noqdeen qaar, iyo ilbaxnimada guud ee aadanaha.
Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Hordhaca Taariikhdii Hore ee Giriigga, waxay baareysaa horumarka ilbaxnimada Griiga sida lagu muujiyey guulaha siyaasadeed, aqooneed, iyo hal-abuurnimo laga soo bilaabo xilligii Maarta illaa dhammaadka xilligii fasalka. Ardaydu waxay akhrin doonaan ilaha asalka ah tarjumaadda iyo sidoo kale shaqooyinka aqoonyahannada casriga ah.
Koorsadani waxay ku siin doontaa faham wanaagsan oo ku saabsan Griigga iyo taariikhdooda iyo saameynta ay ku leeyihiin adduunka
Goorma ayay dowladdu naga mudan tahay daacadnimadeena? Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Aasaaska Akhlaaqda ee Siyaasadda, waxay raadineysaa jawaabaha ugu muhiimsan ee su'aasha sidoo kale waxay ku bilaabmaysaa sahan lagu sameeyo aragtiyaha siyaasadeed ee waaweyn ee iftiiminta iyada oo loo marayo qaababka caadiga ah, xaaladda taariikhiga ah, iyo doodaha casriga ah ee maanta la xiriira siyaasadda.
Waxaad fahmi doontaa anshaxa siyaasada lagu dhisay, taariikhdeeda, iyo saameynta anshaxaasi ku leeyihiin siyaasada.
Koorsadan khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah ee ardayda iyo xirfadleyda, Aasaaska Fiisigiska, waxay siisaa hordhac dhammaystiran mabaadi'da iyo hababka fiisigiska. Koorsadu waxay daboolaysaa makaanikada Newtonian, xiriir gaar ahaaneed, heer-kul-kuleed iyo hirar.
Barteyaashu waxay heli doonaan faham buuxa oo ku saabsan fiisigiska aasaasiga ah oo ay kujiraan xalinta mushkiladaha iyo sababaynta tirada.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Jaamacadda Yale, waxay baraysaa barayaasha adduunka muusikada caadiga ah iyo shaqooyinka qaar ka mid ah farshaxanno caan ah oo kaalintooda ay saameyn ku yeelatay farshaxanka muusikada caadiga ah.
Barteyaashu waxay kasbadaan aqoonta muusikada caadiga ah, laga bilaabo Bach fugues ilaa Mozart symphonies ilaa Puccini operas, waxayna yaqaanaan sida loo aqoonsado.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka internetka ee ugu caansan aragtida bulshada ee internetka maanta. Koorsadan waxaa si bilaash ah ugu bixiya Jaamacadda Yale waxayna ardayda siisaa aragti guud oo ku saabsan shaqooyinka waaweyn ee fikirka bulshada laga soo bilaabo bilowgii xilligan casriga ah illaa 1920-meeyadii. Feejignaanta waxaa la siiyaa xaaladaha bulshada iyo caqliga, qaabdhismeedka fikradaha iyo qaababka, iyo tabarucaadka falanqaynta bulshada casriga ah.
Koorsada internetka ee Yale ee bilaashka ah ee ardayda iyo xirfadleyda, Game Theory, waxay baraysaa bartaha aragtida ciyaarta iyo fikirka istiraatiijiyadeed. Fikradaha sida xukunka, soo-celinta gadaal, isu-dheelitirka Nash, xasilloonida isbeddelka, ballanqaadka waxaa lagu dabaqayaa ciyaaraha lagu ciyaaro fasalka iyo tusaalooyinka laga soo qaatay siyaasadda, dhaqaalaha iyo filimada.
Barteyaashu waxay kasbadaan fikradaha fikirka istiraatiijiyadeed meesha iyo sida loo adeegsado fikradahan.
Koorsada internetka ee Yale ee bilaashka ah ee ardayda iyo xirfadleyda, Hordhaca cilmu-nafsiga, waxay baraysaa bartayaasha aasaasiga u ah cilmu-nafsiga waxayna ka jawaabaysaa su'aalaha aasaasiga ah ee cilmi-nafsiga sidoo kale waxay siisaa dulmar guud oo ku saabsan daraasadda sayniska ee fikirka iyo dhaqanka.
Barteyaashu waxay kuheli doonaan aragti ku saabsan dhinaca nafsaaniga ah ee riyada, gaajada, jaceylka, go'aan gaarida, diinta, farshaxanka, damaca, sheekooyinka, xusuusta iyo sida arimahan ay u saameeyaan heerka koritaanka shaqsiyaadka.
Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Ciqaabta Caasimadda: Jinsiyada, Saboolnimada iyo Faa'iido darrada, waxay baareysaa arrimaha saboolnimada iyo jinsiyadda ee nidaamka cadaaladda dembiyada, gaar ahaan marka la eego xukun dil ah.
Barteyaashu waxay kuheli doonaan aqoonta xaquuqda latalinta dadka aan awoodin qareenada, takoorka isirka, digtoonaanta dacwad soo oogaha, madaxbanaanida garsoorka iyo arimaha caafimaadka maskaxda.
Koorsada khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah, Hordhaca Aragtida Suugaanta, waa sahan lagu sameynayo isbeddellada ugu waaweyn ee aragtida suugaaneed ee qarnigii labaatanaad iyo muxaadaradu waxay siineysaa asalka akhrinta oo u sharraxeysaa halka ay ku habboon tahay.
Waxaad baran doontaa suugaanta waxay tahay, sida loo fahmo iyo ujeedka laga leeyahay.
Koorsadan oo lagu bixiyo khadka tooska ah ee Jaamacadda Yale waxay diiradda saaraysaa aragtiyaha hadda jira ee qaabdhismeedka iyo farsamooyinka kiimikada dabiiciga ah, horumarkooda taariikhiga ah iyo aasaaskooda u kuur galka tijaabada ah.
Waxaad kuheli doontaa xirfadaha aqooneed ee lagama maarmaanka u ah cilmi baarista hal abuurka ah waxaadna kobcin doontaa dhadhanka sayniska asalka ah.
Halkaas waxaad ku leedahay liistada oo dhameystiran, oo leh faahfaahin dhameystiran, oo ku saabsan koorsooyinka internetka ee 15 Yale oo bilaash ah oo loogu talagalay ardayda iyo xirfadleyda taas oo lagama maarmaanka u ah ballaarinta aqoontaada.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee Yale ee bilaashka ah si wanaagsan ayaa loo qaabeeyey oo waxay leeyihiin xiriir saaxiibtinimo oo lala yeesho qof kasta, xitaa waqtiga ugu horreeya, si ay si fudud u fahmaan fikradda waxayna leedahay astaamo kale oo loo dejiyey habka barashada sida soo degsashada, wadaagista, iyo dib-u-marinta qalabka koorsooyinka.
Koorsooyinka intiisa badan waxaa si furan looga bixiyaa youtube-ka waana la isku soo aruuriyaa iyadoo la adeegsanayo liis-ka-ciyaar si loo sameeyo dhammaan koorsooyinka qeybta si fudud looga heli karo meel.
Qaar ka mid ah koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa barnaamijka 'Coursera platform' oo lagu muujiyo mid ka mid ah baraha internetka ee ugu fiican adduunka adduunka maanta.
Ka-hortagga inaadan ka helin wax koorso ah oo xiiso leh liistadan koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee Yale, waxaad iska hubin kartaa 50 kala duwan koorsooyin toos ah oo bilaash ah oo ay bixiso Jaamacadda Harvard oo kahadlaya dhawr qaybood oo waxbarasho ah.
Waxa kale oo jira ilaa 22 kala duwan koorasyo ​​bilaash ah oo bilaash ah oo laga bixiyo Jaamacadda Toronto Kanada dhexdeeda oo aan ku taxnay xiriiriyayaasheeda dalab oo aad sidoo kale ka eegi karto.
Koorsooyinkan internetka ee Yale, koorso kasta waxaa ku jira casharro casharro ah oo dhammaystiran oo lagu soo saaray fiidiyowyo tayo sare leh oo ay la socdaan waxyaabo kale sida manhaj, akhrisyo la soo jeediyey iyo noocyo dhibaato ah. Muxaadarooyinka waxaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo fiidiyo ahaan sidoo kale waxay leeyihiin nooc maqal ah oo keliya.
koorsooyin bilaash ah oo bilaash ah oo ay bixiso jaamacadda YaleKoorsooyinka Yale ee Bilaashka ahKoorsooyinka Yale ee Bilaashka ah ee Ardayda iyo Xirfadleydayaale onlineKoorsooyinka internetka ee Yale university
Previous Post:12 Dugsiyada injineernimada ugufiican aduunka oo leh deeqo waxbarasho
Post Next:Shuruudaha Jaamacadda Calgary | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Qiimeynta
Pingback: 9 -ka ugu sarreeya Shahaadooyinka Wasaaradda Onlaynka ee Bilaashka ah & Shahaadooyinka Seminarka 2022
Pingback: 30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican 2021